Amakhava weThebula le-Stretch ahamba phambili nge-Open Back Production and Factory | UJesson Flag Ubuciko Nemisebenzi
Isembozo sethebula leSpandex: Ukuze Slim futhi Elegant
Kugqokiwe ngezembozo zethu zetafula lombukiso wezokuhweba, itafula lakho lasekuqaleni elicacile nelijwayelekile lizobukeka lihluke ngokuphelele futhi libe lincane ngokushesha. Le ngubo emangalisayo igcizelela ukwakheka kwetafula, amajika amahle angeza umuzwa wobuhle kusethi yonke. Akusilo itafula nje kuphela kepha ithuluzi elihle kakhulu lokwenyusa, elihlinzeka ngesethulo esibukwayo nesihlanzekile. Amakhasimende akho angaba khona nakanjani azokhangwa yile ndlela ekhethekile yokubonisa.
I-polyester ekhethiwe ye-Elastic yezinketho
Isici sendwangu yokweluka siyimfihlo yokulingana. Sinikeza s izinhlobo izindwangu, 180g polyester nokunwebeka, ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi polyester nokunwebeka nelangabi cishe yizona ezisetshenziswa ngo-240g polyester, ngokukhetha kwakho.
180g Nokunwebeka Polyester
Flame-cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi 180g Nokunwebeka Polyester
Flame-cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi 240g Nokunwebeka Polyester
Ithi "Yebo" ku-Budget Friendly & Superior Quality
Kusuka ezintweni zokusetshenziswa, njengezindwangu, ama-inki nezindlela zokuphrinta, kuya kumikhiqizo eqediwe, inqubo yethu ngayinye yenziwa ngokuhambisana nemfuneko enobungani bemvelo. Ngakho-ke ungaqiniseka ngokuphepha kokusebenzisa lesembozo setafula eselulekayo ekubonisweni komcimbi. Futhi, asithathi imali ekhokhwayo eyengeziwe ngokunyathelisa umbala ogcwele nokubekwa kwelogo okugcwele. Ngakho-ke, uma ukhombisa ngekhava yetafula le-spandex ephrintiwe ngokwezifiso emuva okuvulekile, ungawudalula ngokugcwele umyalezo wakho ngesabelomali esilinganiselwe.
Enziwa ngezifiso Hhayi Kuma-Graphics Kepha futhi Ngobukhulu
Ngaphezu kokuphrinta izithombe zangokwezifiso zakho, singenza nokuphrinta okufanayo kwetafula lokubonisa losayizi abakhethekile. Ngezansi kokucaciswa kosayizi wamatafula ajwayelekile wokubonisa nezindwangu zetafula. Uma ungakwazi ukuthola efanelekayo kunazo zonke kusuka kosayizi abakule fomu, vele usishiyele isithombe kanye nochwepheshe wethu womkhiqizo onolwazi ngokukusiza.
(180g nokunwebeka Poly)
（240g nokunwebeka Poly）
Q: Mingaki imibala ongayisebenzisa ekuphrinteni ilogo?
A: Sisebenzisa i-CMYK ukuphrinta, ukuze ukwazi ukusebenzisa imibala eminingi ngendlela othanda ngayo.
Q: Ungangenzela ikhava yetafula eyenziwe ngokwezifiso noma ikhava yetafula elifanele kimi?
IMP: Yebo, osayizi bekhava ejwayelekile bethebula bungu-6 'no-8' esitolo sethu, kepha ubukhulu bekhava yetafula noma ikhava yethebula elungiselelwe nakho kungenziwa ngezifiso ngokobukhulu betafula lakho noma osayizi bethempulethi. Uma udinga osayizi abenziwe ngezifiso, sicela uxhumane nabamele bethu benkonzo yamakhasimende.
Q: Ingabe ilangabi ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi?
A: Yebo, sinezindwangu ezenziwe ngokwezifiso zelangabi ezikhethiwe.
Umbuzo: Ngingawasha noma ngi-ayine ikhava yami yetafula?
IMP: Yebo, ungahlanza futhi ubushelelezi indwangu yakho yetafula ngokuwasha izandla nangoku-ayina.
Q: Ingabe izindwangu zizobuna? Kuthatha isikhathi esingakanani?
A: Ukuvikela ukubuna nokugcina ukuzinza kombala, sisebenzisa ukuphrinta kwe-sublimation ukuqinisekisa umbala osheshayo.
Q: Ungakugwema kanjani ukushayisana lapho usakaza isembozo setafula lokulula?
A: Isizathu esiyinhloko sokuhlambalaza yindwangu encane. Sizosebenzisa uqweqwe lwendwangu engu-180g no-240g ukugwema inkinga.
Amakhava Wethebula Ngokwezifiso
Yelula Ithebula Amakhava Nge-Logo